Kedu uru ndị dị na onye na-agba agba agba agba akwụkwọ (CEH)
Uru nke asambodo CEH
Mee ka ị ghọta ihe ize ndụ na nsogbu
Chọpụta otú ị ga-esi nweta usoro echiche nke onye na-egwu ihe
Ọ bụghị naanị ihe bara uru maka ịbanye n'ime ihe
Mee ka ugwo ahia gi na akwukwo aka nke CEH
Ị ga-achọpụta otú ị ga-esi eji ezigbo ngwá ọrụ hacking
Usoro kachasị dị irè iji nweta akwụkwọ ntinye CEH gị ngwa ngwa
Bụrụ onye na-agba ọsọ na-agba akwụkwọ akwụkwọ na 5 Days
Otu afọ gara aga, ebe nrụọrụ weebụ na-ahụ maka nkà na ụzụ, Beta News, na-ekwu banyere otu akụkụ ndị kachasị mma na-arụ na cyber nche. Ihe edeputara nke a bu ihe kachasi n'etiti ndi mmadu na-achota ugha, nke bu akwukwo akwukwo nso.
Ụlọ ọrụ ahụ bụ CEH bụ akwụkwọ akaebe mbụ iji weta usoro ndị hacking "ọchịchịrị" na otu ìgwè ndị na-ahụ maka ndị ọkachamara IT; na-enye ihe mmụta a na-atụ anya na ọ ga-atụ anya n'eziokwu ma meeghachi omume na usoro ọnyà cyber.
Dika nsonaazụ nke asambodo a, otutu ndi ọkachamara n'elu ụwa na-eme atụmatụ ime ya. Ọ bụrụ na ị na - eche banyere CEH, ị ga - achọ ịma uru ndị ị na - atụnye ohere na ego gị.
Ndị a bụ uru nke akaebe CEH:
EH ga-akwado gị ịkwụ ụgwọ
Dezie ọrụ nchedo gị
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe ndị a niile. Na-agụ maka maka n'ime na pụta wepụta gander na ihe mere i kwesịrị iji mezuo asambodo ahụ. Kedu uru nke CEH?
Ndị omempụ Cyber ​​bụ ndị ọsụ ụzọ, ha ga-ahụkwa ụzọ dị mma iji wakpo ngwá ọrụ IT na iji ihe ndị dị mfe.
Enweghị ihe ọmụma banyere ihe ize ndụ na nsogbu ndị metụtara gị na PC, ị ga-enwe oge nsogbu na-edebe ha.
Site na itinye uche maka ule CEH, ị ga-achọpụta otú ndị na-agba ọsọ na-enyocha usoro ị ga-esi ekpebi ma ọ bụrụ na ị bụ ebumnobi maka ịwakpo. Mbadamba ụda ndị dị n'ime CEH ga-egosi gị usoro a, n'ihi ya i nwere ike itinye ozi ahụ na azụmahịa gị:
1 Module: Okwu Mmalite nke Hacking
2 Module: Nzọụkwụ na Nghọta
3 Module: Nyocha Netwọk
4 Module: Enume
Ebe ndị a bụ nke ọma ma debe ntọala siri ike maka ịhụ otú vulneraments si emetụta mkpakọrịta na ihe kwa ụbọchị.
Imezu nke Akara nke CEH na-enye ndị ọkachamara IT "ndị na-acha ọcha ọcha" na nghọta n'ime echiche nke onye omekome cyber.
Mgbe ndị omempụ na-agbagha ndị omempụ na-etinye aka na ịdaba n'ihe ize ndụ na oge dịka ha na-eme, ọ dị oke mkpa ịhụ otú ndị omempụ a si eduzi ọgụ ha na usoro nkọwa ha.
Site n'ichepụta otu esi ewebata usoro echiche nke onye na-egwu ihe, ị ga-enwe ike ịmalite ime atụmatụ, ị na-elegharị anya n'usoro nchebe gị ugbu a na ndokwa iji chọpụta ebe ndị nwere ike ghara inye aka megide ndị omempụ cyber.
The Akara nke CEH ọ bụghị naanị maka ntinye aka n'ime anụ. Nke a na-agbazi mmezi dịka ihe zuru oke maka nchekwa IT na ndị ọkachamara usoro.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ maka usoro nchịkwa, ị nwere nlele zuru oke iji kpọkọta agụmakwụkwọ cyber gị na CEH. Ihe omumu nke a nke enyere gi aka site na CEH gabu ihe zuru oke maka gi na ndi otu gi ka ha mechie usoro gi megide ndi omekome cyber.
N'ezie, ọbụna ndị ọkachamara na-ahụ maka nchedo IT ga-enweta ihe mkpali site n'ịrụ ọrụ CEH. Site na ohere nke na ị natalarị akwụkwọ asambodo, dị ka (ISC) 2's CISSP, CEH ga-achịkọta ihe ọmụma nchedo gị - zuru okè mgbe ejikọtara ya na nkwupụta na nhazi nhazi nke CISSP rụpụtara.
Ịrụzu ikikere nke ụlọ ọrụ bụ akara akaebe a na-apụghị ịgbagha agbagha maka ikike gị ma nwee ike ịdị ịrịba ama mgbe ị na-atụgharị n'ime imezi akụkụ ọhụrụ.
Ụgwọ ịkwụ ụgwọ nkịtị maka ndị ọkachamara na ntinye CEH bụ £ 55,000, dịka e gosipụtara site na ITJobsWatch. Nke a na-eme ka £ 67,500 na £ 87,000 maka Penetration Tester na Senior Penetration Tester akụkụ n'otu n'otu.
Foto nke dị n'okpuru na-egosiputa ụgwọ akwụ ụgwọ nkịtị maka ndị ọkachamara ECH, ịgbagha nke ITJobsWatch.
Na ohere nke na ị nụrịrị ịmepụta ntọala siri ike na IT ma mụta otú netwọk ọrụ n'ime mkpakọrịta (ị nwere ike mejupụtara certification CompTIA's A + na Network + maka nke a) - CEH nwere ike inye gị ohere iji mee ka ị ghọta ihe n'ime nchekwa IT.
Na ohere na ị nọ n'ọnọdụ a ma chọọ ịmebanye n'ime akụkụ mmefu n'ime nchekwa cyber, tụlee imezu CEH dị nso na certification CompTIA's Security. Ụlọ ọrụ ahụ ga-emepụta nghọta gị banyere ngwá ọrụ na usoro nke ndị na-agba ọsọ na-eji, ebe Nche + ga-enye gị ntọala nke mmụta nchedo IT.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịchọpụta ngwá ọrụ ndị na-eme ka ha chepụta ahụmịhe gị (ma ọ bụ iji chọpụta ọchịchọ gị), ọ gaghị ekwe omume ị gụgoro n'ime na mmụta nke achọrọ iji jiri na ngwaọrụ ndị a.
N'ọnọdụ ọ bụla, site na CEH, ị ga-achọpụta otú ị ga-esi jiri ngwá ọrụ ha rụọ ọrụ - usoro ihe omume hacking ụkpụrụ omume ga-ejikarị tinye aka na 140 ezigbo labs na ihe karịrị 2,200 hacking tools.
Nyochaa otú ndị agha na-eme ihe ike ji eji ngwaọrụ dị iche iche enyere gị aka ịchekwa netwọk gị, ngwa, na ihe dị iche iche.
Kwadebe ya na Ngwọta Ngwá Ọrụ Ọhụrụ na nhazi omume hacking ngwa ngwa na ị ga-enyocha naanị 5 ụbọchị.
CEH v10 Gini bu ihe ohuru? Ekwuputala Nkwekọrịta Hacker Certification v10